Indlela yokuthoba iNdleko yokuFumana uMthengi kwi-ROI enkulu | Martech Zone
Xa usaqala ishishini, kuyahenda ukutsala abathengi ngayo nayiphi na indlela onokuthi ngayo, nokuba lithini na ixabiso, ixesha, okanye amandla abandakanyekayo. Nangona kunjalo, njengoko ufunda kwaye ukhula uya kuqonda ukuba ukulungelelanisa ixabiso elipheleleyo lokufunyanwa kwabathengi kunye ne-ROI kubalulekile. Ukwenza oko, kuya kufuneka wazi ixabiso lokufumana umthengi wakho (các).
Uzibala njani iindleko zokuFumana uMthengi
Ukubala i-CAC, kufuneka nje wahlule zonke iindleko zokuthengisa kunye nentengiso ezibandakanyekayo ekufumaneni umthengi omtsha ngexesha elithile. Ukuba awuqhelanga, siya kudlula Ifomula yeCAC Apha:
Ukuyibeka ngokulula, ukuba uKarl uchithe i-10 yeedola ukuthengisa indawo yakhe ye-lemonade kwaye ufumane abantu abalishumi ukuba bathenge imveliso yakhe kwiveki enye, ixabiso lakhe lokufumana loo veki liya kuba yi-1.00 yeedola.
Lithini ixabiso lokuFumana koMthengi wakho?
Lo mzekelo ulula kakhulu ngasentla. Ewe, kwinkampani yenqanaba leshishini, iCAC inzima kakhulu:
Iyonke intengiso Oku kufuneka kubandakanye abasebenzi bakho bezentengiso, iiarhente zakho, iimpahla zakho, iilayisensi zesoftware yakho, kunye nayo nayiphi na intengiso okanye inkxaso oyifakayo ekufumaneni entsha umthengi.
Iindleko ezipheleleyo zokuthengisa - oku kufuneka kubandakanye abasebenzi bakho bokuthengisa, iikhomishini zabo, kunye neendleko zabo.
Obunye ubunzima kukulinganisa ixesha elibekiweyo apho abathengi bafunyenwe khona. Iindleko zentengiso kunye nentengiso namhlanje azikhawulezi zibangele umthengi ofunyenweyo. Kuya kufuneka uqikelele umndilili wohambo lwakho lokuthenga… apho umthengi onokubanakho ayazi ngemveliso yakho ukuya apho aguqukela khona. Amaxesha amaninzi, oku kunokuba ziinyanga okanye iminyaka ngokuxhomekeke kushishino, imijikelo yohlahlo lwabiwo-mali, kunye nothethathethwano.
Yiyo loo nto kubalulekile ukuba ubandakanye isicwangciso sokungena esichaza ngcono indlela amathemba aviwe ngayo ngawe, xa eqala ukunxulumana nawe, ukuya kutsho kumhla wokuguqulwa kwawo.
ULithoba njani Iindleko zokuFumana koMthengi
Nje ukuba uyazi ukubala i-CAC yakho, uya kufuna ukuyehlisa ukuze ubone inzuzo esempilweni kumthengi ngamnye. Enye into oza kufuna ukuyenza gcina abathengi abakhoyo — ukuthengwa kwabathengi kunokubiza ukuya kuthi ga kasixhenxe ngaphezulu kokuthengisa kubathengi abakhoyo, emva koko!
Ukufumana iingcebiso ezingakumbi malunga nokwandisa iindleko zokufunyanwa kwabathengi, GetVoIP's infographic ngezantsi ibonisa amacebo amatsha amahlanu. Umzekelo, ukwenza umxholo obandakanyekayo kunye nonentsingiselo kunokukunceda ukuba wakhe ubudlelwane nabathengi obakhokelela kwindawo yabo yokuthenga ngokukhawuleza. Yongeza kwezinye iiCTAs ezibulalayo kwaye unokufumana abathengi bathenga kwisiqwenga sokuqala somxholo abawusebenzisayo!
Unokusebenzisa i-automation yokuthengisa ukuze uzuze. Umzekelo, ababhalisile be-Birchbox bafumana i-imeyile eyamkelekileyo elandelwa ngumtya wee-imeyile kwiingcebiso zobuhle kunye namaqhinga okwenza. Uninzi lwaba bantu abakathengi okwangoku, kodwa inkampani ibonelela ngexabiso elikhulu lasimahla ngaphambili. Unokusebenzisa ii-chatbots, ii-imeyile ezenzelwe wena kunye namaphulo eendaba zosasazo ukukhulisa ukusebenza kakuhle.
Ungazifumana ezi kunye nezinye iingcebiso ngezantsi. Ngokwazi kunye nokuphucula i-CAC yakho, uya kukwazi ukubona imbuyekezo engakumbi kutyalo-mali, kwaye isoloko iyinto entle ukuyibona!
tags: Iindleko zokufumanaurhwebo umanyanisokwinkqubo yokubambisanaIbhokisi ye-birchbdrcac ifomulabala cacUkuThengiswa kweMpahlaUkuguqulwa kwenqanaba lokuguqulaindleko ngentengo nganyeikratshiukufunyanwa kwabathengiifomula yeendleko zokufumana umthengiukugcinwa kwabathengiifomgetvoipindlela yokubala cacphucula izinga lokuguqulwaukuphucula croukuzenzekela ngokuzenzekelayoiindleko zentengisoinani labathengi abafunyenweyoukubuyisela kwakhonaiindleko zentengiso
UReuben Yonatan ngumseki kunye ne-CEO ye GetVoIP, Isixhobo sokuthelekisa iVoIP esinceda iinkampani ziqonde kwaye zikhethe isisombululo sonxibelelwano lweshishini kwiimfuno zabo ezithile. UReuben unceda ii-SMB zilungelelanise isicwangciso soshishino kunye nenkcubeko kunye nokuphucula iziseko zophuhliso zeshishini. Mlandele kuTwitter @ReubenYonatan